Thread: [mm]&k&Sm;wyfrawmftaMumif; odaumif;p&m[/mm]
06-11-2011 05:02 AM #1
Wannabe Cupid ASEAN Biggest Army
Thanked 974 Times in 73 Posts
0_6b890_aa7cfec6_XX.jpg (102.5 KB, 10 views)
031417d3bf4538orig.jpg (53.6 KB, 11 views)
03df8bf002f295ori .jpg (48.8 KB, 12 views)
0_6b906_b51cb168_XX&.jpg (100.1 KB, 12 views)
0_6b8ff_40ff0ff_XX.jpg (102.2 KB, 14 views)
Last edited by MMDW; 06-11-2011 at 03:54 PM.
agugu, asg, barronbala, cannavaro, chitpa, creative2020202020, honelay86, hotrod, jokershan, Mgkaung, mgmgthan, nijinsky, Pa Yope Sie, Perigee, RunAtServer, shinyehtoot, Shwe Myoh Tharr, talkyboy, THIHA, wasabi, zero6
06-11-2011 05:08 AM #2
ရုရှားလေတပ် တိုက်ခိုက်ရေး စစ်ယာဉ်များ
အမ်အိုင်-၂၈အန် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာဉ်များ
အက်စ်ယူ-၂၇ ဘက်စုံသုံးတိုက်ခိုက်ရေး လေယာဉ်
တီယူ-၂၂ မဟာဗျုဟာမြောက် ဗုံးကြဲလေယာဉ်
တီယူ-၉၅ မဟာဗျုဟာမြောက် တာဝေး ဗုံးကြဲလေယာဉ်
Last edited by MMDW; 06-11-2011 at 03:55 PM.
toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 23 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf
agugu, asg, barronbala, cannavaro, chitpa, creative2020202020, honelay86, hotrod, htusitthu, jokershan, Mgkaung, mgmgthan, nijinsky, ohpa, Perigee, RunAtServer, shinyehtoot, Shwe Myoh Tharr, talkyboy, THIHA, wasabi, winekyaw, zero6
06-11-2011 04:00 PM #3
ကေအေ-၅၀ ငါးမန်းနက် တိုက်ခိုက်ရေး ရဟတ်ယာ&
ရုရှားလေတပ်၏ နောက်ဆုံးပေါ် တိုက်ခိုက်ရေး စစ်ရဟတ်ယာဉ် ကေအေ-၅၀ ဖြစ်ပါသည်။
Last edited by MMDW; 06-11-2011 at 04:03 PM.
toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 22 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf
agugu, asg, barronbala, cannavaro, chitpa, honelay86, hotrod, htusitthu, jokershan, Mgkaung, mgmgthan, nijinsky, ohpa, Perigee, RunAtServer, shinyehtoot, Shwe Myoh Tharr, talkyboy, THIHA, thuthuaung, wasabi, zero6
06-11-2011 05:27 PM #4
ပထမဆုံး ထုတ်လုပ်သည့် အက်စ်အေ-၃ လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေး ဒုံးပျံစနစ်
နောက်ပိုင်းတွင် အက်စ်အေ-၃ ဒုံးလက်နက်ကို တီ-၅၅ တင့်ကားပေါ်တွင် တပ်ဆင်ကာ အသုံးပြုခဲ့သည်။
ယာဉ်တင် အဆင့်မြင့်တင်မှု မပြုလုပ်ျခင်တွေ့ရစဉ်
Last edited by MMDW; 06-11-2011 at 05:31 PM.
agugu, barronbala, cannavaro, chitpa, creative2020202020, honelay86, hotrod, htusitthu, jokershan, Mgkaung, mgmgthan, MountainGiant, nijinsky, Pa Yope Sie, Perigee, RunAtServer, shinyehtoot, Shwe Myoh Tharr, talkyboy, thuthuaung, wasabi, winekyaw, zero6
06-11-2011 05:34 PM #5
ဒုံးပျံ ပစ်မှတ်ရှာ ရေဒါ ကီလိုမီတာ ၁၈၀ အထိထောက်လှမ်းနိုင်ပါသည်။
မြေပင်မှ ပစ်ခတ်စမ်းသပ်မှု ပြုလုပ်နေစဉ်။
မြန်မာ့တပ်မတော် လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးတပ်များတွင် အသုံးပြုနေသော စနစ်ဖြစ်ပါသည်။အက်စ်အေ-၃ ဒုံးလက်နက်စနစ်ကို နောက်ဆုံးအဆင့်မြင့်တင်ထားခြင်းဖြစ်ပါသည်။
Last edited by MMDW; 06-11-2011 at 05:42 PM.
agugu, barronbala, cannavaro, chitpa, creative2020202020, honelay86, hotrod, htusitthu, jokershan, Mgkaung, mgmgthan, MountainGiant, nijinsky, nna1981, ohpa, Oscar Htun, Pa Yope Sie, Perigee, RunAtServer, shinyehtoot, Shwe Myoh Tharr, talkyboy, thuthuaung, wasabi, winekyaw, zero6
06-11-2011 05:43 PM #6
ဒီစနစ်ကိုတော့ အားလုံးနီးပါးတွေ့ဘူးကြပါလိမ့်မယ် behind the enemy line 1 မှာတွေ့ဘူးကြမှာပါ ဆားဗီးယား ပြည်တွင်းစစ်မှာ ဆာဗ့်တွေက နေတိုးတပ်ဖွဲ့ရဲ့ အက်ဖ်-၁၈ တိုက်လေယာဉ်ကို ပစ်ချခဲ့တဲ့ ဒုံးစနစ်ပါ။အက်ဖ်-၁၈ ဆိုတာ အမေရိကန်ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ် တိုက်လေယာဉ် အမျိုးအစားပါ။
ဒုံးပျံ လက်တွေ့စမ်းသပ် ပစ်ခတ်စဉ်
Last edited by MMDW; 06-11-2011 at 05:51 PM.
agugu, barronbala, cannavaro, chitpa, creative2020202020, honelay86, hotrod, htusitthu, jokershan, kokoye, mgmgthan, MountainGiant, nijinsky, ohpa, Perigee, RunAtServer, shinyehtoot, Shwe Myoh Tharr, talkyboy, thuthuaung, wasabi, winekyaw, zero6
06-13-2011 11:00 PM #7
Kamaz-43269 သံချပ်ကာယာဉ်အား Kama Automobile plant မှထုတ်လုပ်ခဲ့ရာ Mustang ကားအုပ်စု၏ ကိုယ်ထည်ကိုသုံးကာ ဘီးကို ၄ဘီးမောင်းအဖြစ် ရုရှားဖက်ဒရေးရှင်း ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌါန၏ အမှာစာအရ ပြုလုပ်ခဲ့သည်။သံချပ်ကာကားတွင် ကျည်ကာသံကိုယ်ထည်အဆင့် ၅(အေ) တပ်ဆင်ထားပြီး ယာဉ်ဝန်းထမ်း ၂ဦးအတွက် လုံလောက်သော သီးသန့်နေရာနှင့် လိုက်ပါသူဂဦး အတွက် သီးသန့်နေရပါရှိပြီး တံခါး၂ခုနှင့်အပေါ်မှဖွင့်နိုင်သည့်အပေါက်၂ခုပါရှိသည် ။သံချပ်ကာကား၏အလေးချိန်မှာ ၁၂တန်ရှိပြီး ကုန်၂.၅ တန်တင်နိုင်သည်။မြင်းကောင်ရေ၂၄၀ အားရှိ ဒီဇယ်အင်ဂျင်တပ်ဆင်ထားပြီး အမြန်ဆုံးနှုန်း ၁နာရီလျှင် ကီလိုမီတာ၉၀ဖြင့်သွားလားနိုင်သည်။သံချပ်ကာကားသစ်သည်အလွန်အားကိုရပြီး ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းရန်လွယ်ကူသည်။ရုရှားတစ်နိုင်ငံလုံး တွင် ပြုပြင်ရေးဌါန၁၂၄ခု ဖွင့်လှစ်ထားသည်။ရုရှားနိုင်ငံ၏ နယ်ခြားတပ်ဖွဲ့များတွင် အသုံးပြုရန်အတွက် ပြည့်စုံစွာ စမ်းသပ်ခဲ့ရာ အလွန်အောင်မြင်ခဲ့သည်။
Last edited by MMDW; 06-13-2011 at 11:04 PM.
agugu, barronbala, cannavaro, chitpa, creative2020202020, honelay86, hotrod, jokershan, Mgkaung, mgmgthan, MountainGiant, nijinsky, ohpa, Pa Yope Sie, Perigee, shinyehtoot, talkyboy, thuthuaung, wasabi, zenith83, zero6
06-13-2011 11:13 PM #8
2s19 Msta 152mm SPH
ရုရှားနိုင်ငံထုတ် ၁၅၅မမ ယာဉ်တင်အမြောက်များ
၂၀၁၀ စစ်ရေးပြပွဲတွင် ပါဝင် ပြသခဲ့သော ယာဉ်တင် အမြောက်
ယူကရိန်းစစ်တပ်သုံး ယာဉ်တင် အမြောက်
Last edited by MMDW; 06-13-2011 at 11:17 PM.
agugu, bagyitaw, barronbala, cannavaro, chitpa, creative2020202020, hotrod, jokershan, mgmgthan, MountainGiant, nijinsky, Oscar Htun, Perigee, RunAtServer, shinyehtoot, talkyboy, thuyalin2006, wasabi, winekyaw, zenith83, zero6
06-16-2011 10:14 PM #9
Thanked 19 Times in2Posts
Originally Posted by MMDW
ကောင်းတယ် အစ်ကိုရေ ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ခင်ဗျာ..ကေအေ-၅၂ လည်းရှိသေးသလားလို့နော်..
bagyitaw, chitpa, creative2020202020, devilgrin89, honelay86, kokoye, MMDW, nna1981, Perigee, RunAtServer, shinyehtoot
06-18-2011 04:50 AM #10
Tunguska M1 အနီးကပ်လေကြောင်းရန်ကာကွယ်ရေးစနစ်
Tunguska M1 စနစ်ကို ၁၉၇၀-၈၀ ခုနှစ်အတွင်းမှာ ဒီဇိုင်းထုတ်လုပ်ခဲ့ပြီး ၁၉၇၆ ခုနှစ်မှာ စတင်ထုတ်လုပ်ခဲ့ပါတယ်..။ယင်းစနစ်ရဲ့ တစ်စီးတန်ဖိုးမှာ အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၁၆သန်းမျှ တန်းဖိုးရှိပါတယ်။တာတိုပစ်ဒုံးပျံများကို ဘေးတဖက်တချက်စီတွင် လေးခုစီတပ်ဆင်ထားသော ဒုံးပျံ ၈စင်းတပ်ဆင်ထားပါသည်။ထို့ပြင် စက်သေနတ်ကြီး အနေဖြင့် ၃၀မမ စက်သေနတ် ၂လက်တပ်ဆင်ထားပါသည်။စစ်ဆင်နိုင်မှုအကွာအဝေးမှာ ကီလိုမီတာ ၅၀၀ အထိရှိပြီး တစ်နာရီကို ၆၅ ကီလိုမီတာနှုန်းဖြင့် မောင်းနှင်နိုင်ပါသည်။မြန်မာ့တပ်မတော်လေကြောင်းရန်ကာ ကွယ်ရေးတပ် အချို့တွင် တပ်ဆင်ထားသည်ဟုတသိရပါသည်။
စနစ်တွင် တပ်ဆင်ထားသော ဒုံးပျံ အမျိုးအစား
၃၀မမ စက်သေနတ်အားစမ်းသပ် ပစ်ခတ်နေစဉ်
Last edited by MMDW; 06-18-2011 at 04:53 AM.
toHk;0ifvSaom þpmydk'ftwGuf azmfjyyg rdwfaqG 19 OD;rS aus;Zl;wif&SdMuygonf
chitpa, creative2020202020, devilgrin89, honelay86, hotrod, jokershan, kokoye, lovercreator84, MountainGiant, Oscar Htun, pauksi, Perigee, RunAtServer, shinyehtoot, Shwe Myoh Tharr, springnet1997, talkyboy, thuthuaung, thuyalin2006
Quick Navigation International Media Top
air defence missile